Today's News from Nepal (आजको समाचार)
Topic: Today's News from Nepal (आजको समाचार)
Author Topic: Today's News from Nepal (आजको समाचार) (Read 12448 times)
Re: Today's News from Nepal (आजको समाचार)
« Reply #10 on: March 07, 2015, 11:22:17 AM »
Airport to open soon ...
Turkish Airlines plane removed ...
« Reply #11 on: March 07, 2015, 11:46:35 PM »
Quote from: testo on March 07, 2015, 11:22:17 AM
« Reply #12 on: March 08, 2015, 07:21:16 AM »
फागुन २३, २०७१
भारतबाट नयाँ सिलिन्डरमा रोक
काठमाडौं,फागुन २४ - सरकारले नयाँ ग्यास सिलिन्डरको कालो बजारी बढेको भन्दै भारतबाट आयात गरिने रित्ता नयाँ सिलिन्डरमा प्रतिविन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । बजारमा कतै फेला नपरेका आठ लाख ग्यास सिलिन्डर खोजी गर्न पनि सरकारले आदेश दिएको छ ।अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।
आयल निगम १० अर्ब नाफामा
काठमाडौं,फागुन २४ - निरन्तर नोक्सानीमा सञ्चालन भएको नेपाल आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा झन्डै दश अर्ब नाफा गरेको छ । नाफामध्ये ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरिएको निगम प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
दुवै आइजिपी विदेश जाँदै
काठमाडौं फागुन २४ - नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक विदेश भ्रमणमा जाने भएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
तिब्बती शरणार्थी शिविरमा सुरक्षा निगरानी
काठमाडौं फागुन २४ । - सरकारले देशभर रहेका तिब्वती शरणार्थी शिविरमा निगरानी राखेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
होली खेल्न जाँदा बलात्कार गरेको भन्दै हवल्दार पक्राउ
सिरहा, फागुन २४ - सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प सुखिपुरमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी हबल्दार प्रमोदकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
काँकडभिट्टा, फागुन २४ - पोखराको कस्मेटिक पसलमा रमाइरहेकी युवती । एक युवकसँग अप्रत्यासित भेट । निरन्तरको भेटले उनीहरुवीच झांगिएको माया । त्यो मायाले फेरेको बिहेको रुप । त्यसपछि निरन्तर धोकै धोका । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
'चार पक्षीय वार्ताले समाधान दिँदैन'
काठमाडौ, फागुन २४ - राप्रपा नेपालले सत्तारूढ कांग्रेस-एमाले, विपक्षी एमाओवादी र मधेसवादी मोर्चाबीचको वार्ताले मात्र संविधानमा अहिले उठेका विवादलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जनाएको छ । सत्तापक्ष र मोर्चाका नेताबीच शनिबार बिहान औपचारिक वार्ता सुरु भए पनि संविधानसभाको चौथो ठूलो शक्ति र अन्य दलका एजेन्डाबारे चासो नदेखाइएको राप्रपा नेपालको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
डेढ महिना पछि वार्ता
काठमाडाै‌ फागुन २४ - प्रक्रिया कि सहमतिमा संविधान बनाउने भन्नेबारे विवादले करिब डेढ महिना अल्झिएका प्रमुख दलका नेताहरूले शनिबारदेखि औपचारिक संवाद थालेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
एयरपाेर्ट बन्द हुँदा बिहे छुट्याे
दोहा (कतार), फागुन २४ - 'बाबा तपाई किन नआउनुभएको ?', ७ बर्षे छोरीले फोनमा सोधिराख्दा काभ्रेका बिष्णु उप्रेती भक्कादिदै थिए । कतारको हमाद अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको यात्रु प्रतिक्षा कक्षमा तीन दिनदेखि बसिरहेका उप्रेतीले छोरीलाई सम्झाउँदै थिए, 'नेपालमा प्लेन चलेको छैन् । चल्नेबित्तिकै आइहाल्छु ।' कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
श्रमसीपले पनि बराबरी
काठमाडौं, फागुन २४ - कृष्णलक्ष्मी छेताला यतिबेला एक पक्का सिकर्मी हुन् । भक्तपुरको सूर्य विनायकनजिकै उनको काठ कारखाना छ । तीन वर्षअघिसम्म उनको परिचय एउटा गृहिणीका रूपमा सीमित थियो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
« Last Edit: March 11, 2015, 01:43:19 AM by tundikhel »
« Reply #13 on: March 09, 2015, 08:51:02 AM »
फागुन २५, २०७१
चिसियो कांग्रेस-एमाले सम्बन्ध
काठमाडौं फागुन २५ - सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान निमार्णको विषयलाई लिएर सम्बन्ध चिसिएको छ । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
पैसा होइन न्याय : गंगामाया
काठमाडौं फागुन २५ - छोराका हत्यारालाई सजायको मागसहित वीर अस्पतालको शय्यामै अनशन बसेकी गंगामाया अधिकारीले आफ्ना लागि पैसाभन्दा न्याय चाहिएको बताएकी छन्। सरकारका सचिव, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य र अधिकारकर्मीसँग गंगामायाले उक्त माग राखेकी हुन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
पुस/माघमा बस्नुपर्ने व्यवस्थापिका संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै बसेन
काठमाडौं फागुन २५ - 'कैयौं महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र छन्। देश समस्याग्रस्त छ। पुस/माघमा बस्नुपर्ने व्यवस्थापिका संसदको हिउँदे अधिवेशन अझै बसेन। तत्काल बोलाइयोस्।' राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार बिहानै गरेको टि्वट हो यो। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
लुफ्थान्साको पोल्टामा वायुसेवा
काठमाडाै‌ फागुन २५ - सबैजसो राजनीतिक दल र शक्ति हरूले आर्थिक दुरुपयोगको माध्यम बनाएको नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने तयारी गरेको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
एउटा आदरणीय र 'क्रूर' सम्पादक
काठमाडौं फागुन २५ - प्रख्यात सम्पादक विनोद मेहताको उनकै शब्दमा वास्तविक उमेर ७४ तर रेकर्डमा ७३ वर्षमा निधन भयो, दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेजमा आइतबार, लामो बिमारीपछि। फोक्सोसम्बन्धी र अन्य रोगले च्याप्दै गएपछि उनलाई निको नहुने र कुनै पनि क्षण अन्त्य हुने अनुमानले केही दिनयतादेखि मित्रमण्डलीलाई चिन्तित तुल्याउँदै आएको थियो।
कतारको शौचालयमा नेपाली युवतीले अवैध सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माउदा
दोहा (कतार), फाल्गुन २५ - - एउटी युवतीले आफू गर्भवती भएको कुन हदसम्म लुकाउन सक्छिन् ? कतारमा एक नेपाली युबती बच्चा जन्माउनुजेलसम्म त्यसमा सफल भइन् । नवलपरासीकी एक २३ बर्षीया युवतीले गत आइतबार राति आफ्नो क्याम्पको शौचालयमा बच्चा जन्माएपछि मात्रै अरुले थाहा पाए । 'हामीले उसको पेट पहिलादेखि नै बढिरहेको देखेको थियौं', ती युबतीसँगै काम गर्नेले भनिन्, 'उसलाई पहिला देखि सोध्दै आइरहेको थियौं । तर, उसले सधै मोटाएको भनेर ढाँटदै आइन ।' कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
क्रिकेट खेलाडीका लागि यो विवाहको मौसम
काठमाडौ, फागुन २५ - नेपाली क्रिकेट खेलाडीका लागि यो विवाहको मौसम नै जस्तो छ । राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खडकासहित वसन्त रेग्मी, अमृत भट्टराई, प्रदीप ऐरी यही सेरोफेरोमा वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरिसकेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
जेठ १५ मा संविधान जारी गर्ने गरी प्रमुख दलबीच वार्ता
काठमाडौ, फागुन २५ - प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच जेठ १५ मा संविधान जारी गर्ने गरी प्रमुख दलबीच वार्ता अघि बढाउन कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच भएको कुराकानी सहमतिका लागि छलफल तीब्र पार्ने समझदारी भएकोछ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
स्वाइन फ्लुपछि सतर्क हुन नेताहरुलाइ चिकित्सककाे सल्लाह
काठमाडौ, फागुन २५ - मुलुकमा स्वाइन फ्लुको संक्रमण बढ्न थालेपछि चिकित्सकहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दुई सातासम्म रुघा-खोकी लागेका व्यक्तिसँग नभेट्न सल्लाह दिएका छन् । ब्रोङकाइटिस, दम र क्यान्सर लगायत उपचारका क्रममा रोगप्रतिरोधक क्षमता कमजोर भएका अन्य व्यक्ति समेत सजग रहनु पर्ने विशेषज्ञहले बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
« Last Edit: March 11, 2015, 01:43:02 AM by tundikhel »
« Reply #14 on: March 11, 2015, 01:42:47 AM »
अड्कियो शीर्ष संवाद
काठमाडौं फागुन २६ - डेढ महिना लामो संवादहीनता तोड्दै संविधानमा सहमति जुटाउन निरन्तर छलफलमा बस्ने सहमति गरेका प्रमुख चार शक्तिको दोस्रो बैठक तीन दिनसम्म बस्न सकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भन्दै बैठकमा नआउँदा छलफल सुरु हुनै सकेको छैन। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
स्तुपाका नौ विद्यार्थी परीक्षाबाट बञ्चित
काठमाडौं फागुन २६ - अनुमति पाएभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको स्तुपा नर्सिङ कलेजका नौं विद्यार्थी बिएस्सी नर्सिङ परीक्षा दिनबाट बन्चित र्भका छन् । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रहरी कुट्ने विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्वन्धी मुद्दा
पोखरा फागुन २७ - पर्यटकीय केन्द्र लेकसाइडको ओजन डिस्कोमा शुक्रबार भएको झगडाका क्रममा प्रहरी कुट्ने व्यक्तिविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगसम्वन्धी मुद्दा दर्ता भएको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ । झगडा गरिरहेकालाई छुट्याउन गएका प्रहरीमध्ये जवान भीमबहादुर रानामाथि प्रहार गरेको अभियोगमा पोखरा १५ का २७ वर्षे किरण गुरुङ, पोखरा १७ बस्ने प्रशान्त गुरुङ र ठेगाना थाहा नभएका अनील गुरुङविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ।
एमाओवादीले भन्यो, 'आममाफी खारेजी 'त्रुटिपूर्ण'
काठमाडौं फागुन २६ - एमाओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या र मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका दोषीलाई माफी दिन नमिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको मर्म र भावनाविपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
छोराछोरी अचेत भए,श्रीमान् पनि भुइँमा पल्टिनुभो
काठमाडौं फागुन २६ - गर्भवती २८ वर्षीया सम्झना तामाङले सोमबार बिहान घट्टमा पिसेर ल्याएको पिठोको रोटी खाजाका रूपमा तीन छोराछोरी (सात वर्षीया सुमित्रा, साढे दुई वर्षीया सानुकान्छी र पाँच वर्षीय अर्जुन), श्रीमान् टेकबहादुर, ससुरा सन्तबाहदुर र सासू फूलमतीलाई दहीसँग खान दिइएकी थिइन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
बीउका लागि राखेको दुई पाथी गहुँले निम्त्यायाे काल
धादिङ फागुन २६ - धादिङ जिल्लाको पिडा गाविस ८ पुकुनका ६७ वर्षीय सन्तबहादुर स्याङ्तानले मुरी फलाउँछु भनेर बीउका लागि राखेको दुई पाथी गहुँले आफ्नै काल निम्त्याउँछ भन्ने कहिल्यै सोचेका थिएनन् होला। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
गोठमै स्वास्थ्थ चौकी
राजविराज फागुन २६ - राजविराजको गोबरगाढाका स्थानीय हरिनारायण यादव सोमबार बिहान ११ बजेतिर भैसी दुहुँदै थिए । दुई दर्जन भैंसीले खचाखच गोठकोे एयटा कुनामा राखिएको भकारीमै मातृशिशु स्वास्थ्थसम्बन्धी सूचना उल्लिखित फ्लेक्स टाँसिएको थियो ।
सुटुक्क विहे गरिन सुमिनाले
सुटुक्क विहे गरिन सुमिनाले काठमाडौं फागुन २६ - केही समयअघिदेखि मिडिया तथा फिल्मर्मबाट टाढा रहँदै आएकी अभिनेत्री सुमिना घिमिरेले गुपचुप बिहे गरेकी छिन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
विप्लवको गाडी पार्किङ वैद्यको पार्टी कार्यालयमा
काठमाडौं फागुन २६ - सामान्यतया कुनै पार्टी विभाजित हुदाँ विभाजित पार्टीका दुबै पक्षका नेता कार्यकर्ताका बीचमा आरोप, प्रत्यारोप चल्ने, असहिष्णु गतिविधि हुनेजस्ता कुरालाई अन्यथा लिन सकिँदैन ।
म्यानपावर व्यवसायीसँग झुक्यो सरकार
काठमाडौं फागुन २६ - म्यानपावर व्यवसायीको दबाबपछि बैंकिङ कारोबार अनिवार्य गर्नबाट सरकार पछि हटेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
लोकमार्गमा आपतकालिन सुरक्षा प्रणाली
काठमाडौं फागुन २६ - बीपी लोकमार्गमा आपतकालिन सूचना प्रणाली सुरु गरिएको छ । यो प्रणालीले यात्रा गर्ने बाटोको स्थिति, वर्षातका बेलामा बाटोको अवस्था, कुनै दुर्घटना भएर समस्या भएको छ कि छैन जस्ता सडक यात्रा गर्दा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
बस्न्यातविरुद्ध उजुरी सुनुवाइ समितिमा
काठमाडौ, फागुन २६ - संवैधानिक परिषदद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा सिफारिस गरिएका दीप बस्न्यातविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । परिषदले सिफारिस गरेका अख्तियारका ५ आयुक्त र लोकसेवा आयोगका ७ पदाधिकारीमध्ये बस्न्यातविरुद्ध पहिलो उजुरी परेको हो । 'सचेत' नागरिकका तर्फबाट समिति सचिवालयमा दर्ता गराईको बेनामी उजुरीमा बस्न्यातले निजामती सेवामा कार्यरत रहँदा बढुवा प्रयोजनका लागि शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको दाबी छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
« Reply #15 on: March 11, 2015, 01:22:14 PM »
सर्वोच्चमा २ करोड बेरुजु
काठमाडौं,फागुन २७ - सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षमा दुई करोड बेरुजु रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आव ०७०–०७१ मा सर्वोच्चको विनियोजित बजेटमा करिब दुई करोड बेरुजु रहेको उल्लेख गरिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
सिकिस्तमाथि अस्पतालको व्यापार
काठमाडौं फागुन २७ - विषादी मिसाएर राखिएको गहुँ पिसाएर रोटी खाँदा सिकिस्त भएका धादिङ पिंडा पुकुनका बिरामीमाथि काठमाडौंका केही अस्पतालले व्यापार गरेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
'दैलो उघारिदिनेसम्म रहेनन्’
धादिङ,फागुन २७ - पुकुनगाउँको आङमा घाम लाग्न सकेको छैन । दुई दिनदेखि कुनै घरमा चुलो बलेको छैन । चिम्सा,गहिरा आँखा आँसुले टम्म भरिएका छन् । घरीघरी भित्रैबाट निस्केर आँसुको ढिक्कासँगै बहन्छ पीडा । मुस्कान हराएको ओठ कलेटी परेका छन् । फुंग उडेका अनुहारमा शोक र चिन्ताको रेखा मात्र देखिन्छन् । नागिरक दैनिकमा समाचार छ ।
'बलात्कारीलाई फाँसी होस्'
वीरगन्ज फागुन २७ - सडकमा राखिएको बलात्कृत छोरीको शव छेउमै बसेका बाबु नारायण साहले रुँदै भने, 'बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय नभएसम्म म छोरीको शव यहाँबाट उठाउँदिनँ। राज्यले बलात्कारीलाई फाँसी दिने व्यवस्था कानुनमा गरोस्। यस्तो व्यवस्था नभएसम्म म शव जलाउँदिनँ।' अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
श्रमिकको पसिनामा नेताहरु सयर
काठमाडौं फागुन २७ - जहानपरिवार पाल्ने उद्धेश्यले चर्को ब्याजमा ऋण काढेर विदेशिने नेपालीको रगतपसिनाबाट जम्मा भएको रकमबाट प्रमुख दलका नेतासहित संसदको एउटा टोलीले विदेश सेयर गर्ने भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
मलद्धारमा राखेर सुन तस्करी
काठमाडौं फागुन २७ - सुन तस्करले भरियालाई मलद्धारमा कुलाउन लगाएर सुन तस्करी गराउन थालेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
बाबा,मलाई एसिड छ्याप्ने पक्राउ परेको हो ?
काठमाडौं फागुन २७ - बाबा, आज अपराधी पक्राउ परेको हो ? एसिड आक्रमणबाट घाइते किशोरी संगीता थापा मगरले आफ्ना बाबुलाई हरेक दिन गर्ने प्रश्न हो यो । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक गाडी चढ्नू
काठमाडौं फागुन २७ - महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले फागुन २९ गतेबाट प्रत्येक शुक्रबार कार्यलय आउँदा, कार्यलयबाट फर्कदा अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न मातहतका ट्राफिक प्रहरी इकाइलाई निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रहरी मास्क किन्न जाँदा कैदी फरार
काठमाडौं फागुन २७ - लागु औषध मुद्धामा १५ वर्ष जेल सजाय पाएको एक कैदी फरार भएका छन्। आँखा उपचारका लागि त्रिपुरेश्वस्थित आँखा अस्पतालमा ल्याइएका कैदी पासाङ शेर्पा तीन जना प्रहरीलाई छक्याएर फरार भएका हुन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
चुलो निभाउन बिर्सिंदा बस्तीभरि आगो
रौतहट फागुन २७ - रौतहटका छुट्टाछुट्टै तीन स्थानमा आगलागी हुँदा ११ वटा घर तथा सवारीसाधन जलेका छन्। गंगापिपरा, फतुवा महेशपुर गाविस र गरुडा नगरपालिकामा मंगलबार एकै दिन आगलागी भएको हो। आगलागीपछि करिब एक दर्जन परिवार घरबारविहीन भएका छन्। दुवै घटनामा चुलोबाट सल्किएको आगो बस्तीमा फैलिएको प्रहरीले जनाएको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
अनुमतिबिनै विदेशमा खाता सञ्चालन
काठमाडौ, फागुन २७ - विदेशमा कुनै पनि नेपालीले बैंक खाता संचालन गर्न अनुमति नलिएको भेटिएको छ । स्विजरल्याण्ड स्थित एचएसबीसी प्राइभेट बैंकमा नेपालीको नाममा रकम देखिए पछि अनुसन्धान गर्दा यस्तो भेटिएको हो । विदेशमा रहदा खोलिएको खाताबारे राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएर संचालनमा राख्न सकिने कानून छ । 'विदेशमा खाता संचालनका लागि कुनै पनि अनुमति लिइएको छैन' राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'धेरै पहिला केहि खाताको जानकारी दिने गरिएको सुनिए पनि राष्ट्र बैंकमा यस्ता कुनै पनि खाताको तथ्याकं छैन ।' कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
कर्मचारी टनाटन, स्वास्थ्य केन्द्र खाली
दोलखा, फाल्गुन २७ - प्रसव बेथाले च्यापेपछि झुलेकी आम्बिका पाख्रिनलाई हतारहतार गाउँलेले नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा पुर्‍याए । बर्थिङ सेन्टरसहितको स्वास्थ्य चौकीमा ताल्चा मारेर कर्मचारी आ-आफ्नो काममा हिडेकाले छटपटाइरहेकी पाख्रिनलाई सुत्केरी गराउनकै लागि सदरमुकाम चरिकोटमा ल्याउनु परेको छ । सेवा नपाएको रीसले आम्बिकाका आफन्तले झुले स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारीले लगाएको ताल्चामाथि अर्को ताल्चा लगाइदिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
हाेला त राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच पुनः एकीकरण
काठमाडौ, फागुन २७ - पूर्व पञ्चहरुको एकता र विभाजनको नयाँ श्रृखलाका रुपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) बीच पुनः एकिकरण प्रयास सुरु भएको छ । संविधानसभाको चौथो दल राप्रपा नेपाल र उसको माउ पार्टी राप्रपाले गठन गरेको एकता कार्यदलको बुधबार सिंहदरवारमा बस्ने बैठकले एकिकरण प्रयासलाई औपचारिक रुपमा अघि बढाउने छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा राप्रपाबाट टुक्रिएर बनेको राप्रपा नेपालले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा समानुपातिक क्षेत्रबाट २५ सिट पाएको छ ।
सहमतिकाे वातावरण बन्दैछ
काठमाडौं, फागुन २६ - प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने दिशामा सकारात्मक वातावरण बन्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सहयोग पुर्‍याउन एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको विपक्षी मोर्चासहितका सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
« Reply #16 on: March 12, 2015, 08:48:36 AM »
कांग्रेस–एमाले टाढिएकै हुन् ?
काठमाडौं,फागुन २८ - सत्तासाझेदार कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद देखिन थालेको छ । संविधानसभामा प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिँदै आएको एमाले सहमतिबाटै संविधान बनाउन पहल गर्ने कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयपछि चिढिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि ऊ सन्तुष्ट छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
बालबालिकालाई म्याद गुज्रेको औषधि
झापा फागुन २८ - कलिला विद्यार्थीलाई हात्तीपाइले रोग विरुद्ध म्याद नाघेको औषधि खुवाइएको प्रमाणित भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
पूर्वका ७ नाकाबाट खुलेआम तस्करी
काठमाडौं फागुन २८ - राजस्व अनुसन्धान विभागले पूर्वान्चलका विराटनगर र मेचीसहित ७ भन्सार नाकाबाट खुलेआम तस्करी भइरहेको खुलासा गरेको छ । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
ल्हारक्याल ठगीका फरार आरोपी
ल्हारक्याल ठगीका फरार आरोपी काठमाडौं फागुन २८ - दोहोरो नागरिकता र राहदानी विवादमा आलोचित एकीकृत माओवादीका सभासद ल्हारक्याल लामा र्वैदेशिक रोजगारीका लागि मकाउ पठाइदिने भन्दै म्यानपावर संचालक र सयौं युवासँग करोडौं रकम ठगी गरेको मुद्धाका फरार आरोपी रहेको खुलेको छ । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
स्विस खातामा मुख्यसचिवको चासो
काठमाडौं फागुन २८ - स्विस बैंकमा नेपालीको रकम भेटिएपछि भइरहेको छानबिनमा मुख्य सचिव लिलामणि पौडेले चासो दिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
योगगुरु रामदेव नेपाल आउने
काठमाडौ, फागुन २८ - भारतीय योगगुरु रामदेव योग शिविर सञ्चालन गर्न बैशाखको दोस्रो साता नेपाल आउने भएका छन् । बैशाख ११ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंको खुलामञ्चमा हुने पाँचदिने योग शिविरमा भाग लिन रामदेव नेपाल आउन लागेका हुन् । आयुर्वेदको माध्यमबाट नेपालीको स्वास्थ्य सचेतता बढाउने उद्देश्यले योग शिविर सञ्चालन गर्न लागिएको आयोजकले जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
स्वाइन फ्लुबाट थप एकको मृत्यु
काठमाडौं, फागुन २८ - स्वाइन फ्लुग्रस्त ४८ वर्षीय पुरुषको ओम अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
प्रक्रिया सुरु गर्ने सभाध्यक्षकाे चेतावनी
काठमाडौ, फागुन २८ - संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नयाँ संविधानका विवादीत अन्तरबस्तुमा सहमति निर्माणमा भइरहेको विलम्बप्रति असन्तुष्टि जनाउदै स्थगित प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले संविधानसभाको बैठक अनन्तकालसम्म नरोकिएको स्मरण गराए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
कतारमा नेपाली कामदारको शब ३१ महिनादेखि अलपत्र
कतार, फाल्गुन २८ - पहिचान नखुलेका एक नेपाली कामदारको शब यहाँ ३१ महिनादेखि अलपत्र परेको छ । ती कामदारको सन् २०१२ अगस्ट २७ मा मृत्यु भएको थियो । अस्पतालमा ती कामदारलार्य 'उत्तमलाल महत्तो'को नाममा भर्ना भएको थियो । भर्ना भएको दुईदिनमा धेरैजसो अंगले काम नगरेपछि मृत्यु भएको हमाद अस्पतालले जनाएको छ । हमाद अस्पतालमा उनको दर्ता नम्बर 'एचसि २७४४७२३' छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
« Reply #17 on: March 13, 2015, 12:53:55 PM »
७ वर्षदेखिको अलमल
काठमाडौं,फागुन २९ - बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल निर्माण समस्यामै रुमल्लिएको छ । १७ वर्षदेखि सुरु गर्ने भनिएको विमानस्थल निर्माणका लागि गरिने प्रारम्भिक कामसमेत हुने सकेका छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
ठेकेदारद्वारा मेलम्चीको काम रोक्ने चेतावनी
काठमाडौं फागुन २९ - मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार इटालियन को-अपेराटिभा मुरातोरी एन्ड केमेन्टेस्टी सीएमसीले थप भुक्तानी नपाए सुरुङ खन्ने काम नै रोक्ने चेतावनी दिएको छ । आर्थिक समस्या भएको जिकिर गर्दै उसले तत्काल थप १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि मागेको छ । आयोजना विकास समितिले उसको माग अस्वीकार गरिसकेको छ । काराेबार दैनिकमा समाचार छ ।
बिहे गरेर घर नपुग्दै बेहुला बेहुली नियन्त्रणमा
धादिङ फागुन २९ - विवाह सकेर बुधबार साँझ बेहुलीसहित बेहुलाको घरतर्फ फर्कदै गरेको जन्ती घर नपुग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्नुपरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । धादिङ चैनपुरका ३९ वर्षीय चन्द्रबहादुर इटनीले दोस्रो विहे गरेको उजुरीका परेपछि प्रहरीले बेहुला बेहुलीसहित जन्तीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
दस अर्ब झार्न नयाँ संस्था थपिँदै
काठमाडौं फागुन २९ - अपरादर्शिता र अनियमितताका कारण विवादीत बनेको बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको समयावधि लम्ब्याएर दाताबाट १० अर्व रुपैयाँ झार्न वन मन्त्रालयले फेरि नयाँ संस्था जन्माउने तयारी गरेको छ । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
पर्सामा सुस्त मनस्थिति पनि जोगिइनन्
पर्सा फागुन २९ - एक व्यक्तिले सुस्त मनस्थिति युवतीलाई बलात्कार गरेका छन् ।
भाेलिदेखि अाैपचारिक वार्ता
काठमाडौ, फागुन २९ - प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख दलहरूबीच शुक्रबार अनौपचारिक छलफल गरेपछि शनिबारदेखि औपचारिक वार्ता गर्ने निधो गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बेलुका दुई नेताबीच भएको भेटवार्तामा एक दिन अनौपचारिक छलफल गर्ने र त्यसपछि औपचारिक संवाद अघि बढाउने समझदारी बनेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
गरिवका नाममा करोडौंको फर्जी बिल
काठमाडौं, फागुन २९ - गरिबी निवारण कोषका कर्मचारीहरुले यातायत खर्चका नाममा फर्जी बिल पेस गरेर रकम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारमा बानी परेकाहरुलाई वार्ता चाहिएको छ
काठमाडौं, फागुन २९ - ३० दलीय विपक्षी गठबन्धनको एक मख्य घटक मधेसी मोर्चा सडकमा जाने कि सम्झौतामा फर्कने दोबाटोमा उभिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
विदेश सयरमा हाकिमहरुकाे हत्ते
काठमाडौ, फागुन २९ - - दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ५० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बनाएको कार्यक्रममा करिब ७० लाख रुपैयाँ त विदेश भ्रमणमा खर्च गर्ने प्रस्ताव थियो । विदेशका विमानस्थलहरुको स्थलगत भ्रमण गर्न भनेर कार्यक्रममा उक्त रकम राखिएको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
गोविन्द केसी चैत ८ गते देखी पुनः आमरण अनसन बस्ने
काठमाडौ, फागुन २९ - प्राडा गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलगायतका विगतमा भएका सम्झौता पूरा गर्न सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिदै आगामी चैत ८ गते देखी पुनः आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
« Reply #18 on: March 13, 2015, 02:53:09 PM »
एसिड प्रहार घटनाको छानबिन प्रहरीले आज सार्वजनिक गर्ने
एसएलसीको ट्युशन पढ्न गएका दुई छात्रामाथि एसिड प्रहार गर्ने घटनाको अनुसन्धान प्रगति प्रहरीले शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ। अनुसन्धानबाट देखिएका तथ्य सार्वजनिक गर्न आजै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। प्रहरीको विशेष टोलीले तीन साता लामो अनुसन्धानपछि प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न लागेको हो।
महानगरीय प्रहरी प्रमुख एआइजी विज्ञानराज शर्माले एसिड आक्रमण घटना अनुसन्धानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न लागेको बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, प्रहरी चुप लागेर बसेको छैन। यतिका दिनसम्म प्रहरीले के के गर्‍यो भन्ने कुरा आज सार्वजनिक हुन्छ।'
महागुन १० गते राजधानीको केन्द्र बशन्तपुरस्थित एक ट्युशन सेन्टरमा पढ्दै गरेका सिमा बस्नेत र संगिता मगरलाई एसिड प्रहार गरी घाइते बनाइएको थियो । दुवैको अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। एसिड प्रहारबाट घाइते सीमाले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई चार पृष्‍ठ लामाे पत्र लेख्दै अभियुक्तलाई पक्राउ गरी फाँसी दिन माग गरेकी थिइन् ।
एसिड प्रहार गर्ने अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकार तथा प्रहरीको संसदीय समिति तथा नागरिक समाजबाट कडा आलोचना भएको छ। एसिड घटनाबारे अनुसन्धान गर्न एसपी मिरा चौधरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। एसिड हान्ने युवक पहिचान भइसकेको र छिटै सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी प्रहरी स्राेतले बतायो।
« Reply #19 on: March 17, 2015, 04:03:38 AM »
रानीबारी हत्याकाण्ड : हत्याको कारण र प्रमुख योजनाकार रहस्यमै
प्रहरीले १२ वर्ष पुरानो 'रानीबारी हत्याकाण्ड' मा संलग्न भनी पहिलोपटक दुई जना आरोपी सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीको रानीबारीस्थित गीता खड्काको घरमा डेरा बस्ने हेमन्त श्रेष्ठ र उनकी पत्नी अञ्जलीको १२ वर्षअघि हत्या भएको थियो। १८ अनुसन्धान समिति, २ सय हाराहारी केरकारपछि पनि यो हत्याकाण्ड प्रहरीले सुल्झाउन सकेको थिएन।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी 'हत्यामा संलग्न' भन्दै मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहानलाई सार्वजनिक गरेको हो। आरोपीहरू श्रेष्ठ दम्पतीको नभई घरबेटी गीताको हत्या गर्न गएको प्रहरी दाबी छ। यसका लागि उनीहरूले दुई लाख रुपैयाँ पाएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यो रकम दिएर हत्या गर्न पठाउने व्यक्ति भने सार्वजनिक गरिएको छैन। ती व्यक्ति विदेशमा रहेको प्रहरी भनाइ छ।
कम्प्युटरसम्बन्धी कारोबारमा संलग्न श्रेष्ठ दम्पतीको २०५९ असार ३१ गते बिहान ६ बजेतिर हत्या भएको थियो। त्यही घटनामा गम्भीर घाइते भएकी ७ वर्षीया छोरीको भने ज्यान जोगियो।
प्रहरीले सुरुमा घरबेटी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा संलग्न गीताकै योजनामा हत्या भएको भन्दै उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसपछि हेटौंडाका प्रकाश लामा र ईश्वर गुरुङ भनी दुई सम्भावित आरोपीको स्केच सार्वजनिक गरियो। तर, दुवैमा उपलब्धि हात लागेन।
सिआइबीले यही असोजबाट अनुसन्धान ब्युँताउँदै 'साइलेन्ट सर्च' अप्रेसन सुरु गरेपछि मनराज र प्रमेश समातिएका हुन्।
को हुन् मनराज र प्रमेश?
दोलखाका मनराज गुरुङ २०५८ तिर काठमाडौंका सामाखुसी र चक्रपथ क्षेत्रका टोलेगुन्डा थिए। रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा संलग्न दाजु उमेशको आडमा उनी गुन्डागर्दीमा अघि बढे। उमेशलाई जस्तै उनलाई पनि त्यसबेलाका कुख्यात 'गुन्डानाइके' राजु गोर्खालीको संरक्षण थियो। बेबिलोन डिस्कोमा राकेश लिम्बूको हत्यापछि उमेश पक्राउ परे भने गोर्खाली फरार भए। त्यसपछि मनराज चक्रे मिलन समूहमा संलग्न हुन पुगे।
Manraj Gurung And Pramesh Chauhan Anjalai Case
२०६० जेठ १७ गते राजधानीको गोलढुंगामा म्यानपावर व्यवसायी लीलामाया गिरीको हत्या अभियोगमा मनराज पक्राउ परे। उनलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्यो। लीलामायालाई उनकै श्रीमानले हत्या गराएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको थियो। प्रहरीका अनुसार मनराजले ६ लाख रुपैयाँ लिएर प्रमेश चौहानको सहयोगमा लीलामायाको हत्या गरेका थिए। प्रमेशले सबै घटनाको जिम्मेवारी आफैं लिएपछि मनराजसहित अन्य आरोपी छुटे। प्रमेशलाई भने आजीवन कारावास भयो। उनी ९ वर्षपछि रिहा भए।
लीलामाया हत्या अभियोगबाट उन्मुक्ति पाए पनि मनराजको प्रहरी कार्यालय आउजाउ जारी रह्यो। उनी कहिले कुटपिट त कहिले रकम असुली आरोपमा पक्राउ परिरहे। दोलखामा सिडिओ कुटेको विषयमा समेत जोडिए। तर, बलियो राजनीतिक संरक्षणका कारण उनी सधैं जोगिन्थे।
पाँच वर्षअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) गठनपछि रानीबारी हत्याकाण्डलाई अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राखिएको थियो। २०७१ असोजबाट नयाँ टोली बनाएर 'साइलेन्ट सर्च' अप्रेसन थालियो।
प्रहरीले पीडितहरूको बयानमा खुलेको हुलियाका आधारमा नयाँ स्केच बनायो। पुराना अनुसन्धान प्रतिवेदन केलायो। यस्तै प्रकृतिका अन्य घटना र त्यसमा संलग्नको सूची तयार पार्यो ।
'यसैबाट मनराज र प्रमेश नै रानीबारी हत्याकाण्डमा संलग्न रहेको नतिजामा पुग्यौं,' प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ब्युरो प्रमुख हेमन्त मल्लले आइतबार भने, 'हेमन्त र अञ्जलीलाई मनराजले खुकुरी हानेका थिए, प्रमेशले सघाएका थिए।'
प्रहरीलाई यो निकर्षमा पुर्या उने प्रमुख कडी लीलामायाको हत्या हो। रानीबारीजस्तै पुराना घटनाको फाइल अध्ययन गर्ने क्रममा सिआइबीले लीलामाया हत्याकाण्डको फाइल पल्टायो। घटनाको प्रकृति उस्तै देखिएपछि अनुसन्धान अधिकारीहरूको ध्यान मनराज र प्रमेशतिर केन्द्रित भयो।
रानीबारी हत्यामा संलग्नले चिया खाने बहानामा अञ्जलीलाई भान्छातिर पठाएर खुकुरी हानेका थिए। लीलामायालाई पनि पानी खाने बहानामा झुक्याएर हत्या गरिएको थियो। दुवै घटनामा खुकुरीलाई हतियार बनाइएको थियो। 'घटनाको वस्तुस्थिति ९० प्रतिशत मिलेपछि हामीले दुवैलाई केन्द्रमा राखेर अनुसनधान बढायौं,' मल्लले भने।
प्रहरीले २०७१ असोज ७ मा घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र पुरानो विवरणका आधारमा सम्भावित हत्याराको नयाँ स्केच बनायो। उक्त घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हाल १९ वर्षीया छोरी र भाग्दै गर्दा देख्ने छरछिमेकीलाई नयाँ स्केच दुखाउँदा मेल खायो। त्यसपछि प्रहरीले विभिन्न स्रोतबाट मनराज र प्रमेशको १० वर्ष पुरानो तस्बिर खोजेर प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई देखायो। प्रत्यक्षदर्शीले उही भएको किटान गरेपछि सिआइबी टोलीले शुक्रबार दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
दुवैले घटनामा संलग्न नरहेको दाबी गरे पनि पोलिग्राफ परीक्षणमा झुटो देखिएको प्रहरी भनाइ छ। 'तत्कालीन रिर्पोटअनुसार घटनामा संलग्नको दाहिने हातको कान्छी र माझी औंलामा काटेको उल्लेख थियो,' अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले भन्यो, 'मनराजको हातमा पनि खुकुरीको चोटका दाग छन्।'
किन मारिए श्रेष्ठ दम्पती
प्रहरीले आरोपी सार्वजनिक गरे पनि रानीबारी हत्याकाण्डको भरपर्दो कारण भने पत्ता लगाउन सकेको छैन।
डिआइजी मल्लका अनुसार मनराज र प्रमेशको निशाना श्रेष्ठ दम्पती नभई घरधनी गीता हुन्। उनीहरूले दुई लाख रुपैयाँमा गीताको हत्या गर्ने जिम्मेवारी लिएको प्रहरी भनाइ छ।
प्रहरीका अनुसार हत्या योजना सफल बनाउन दुवै जना एक साताअघि नै कोठा खोज्ने बहानामा गीताको घर पुगेका थिए। त्यही बेला अञ्जलीसँग भेट भयो। उनीहरूले आफू विद्यार्थी भएको र बुबा स्विट्जरल्यान्डमा रहेकाले जति पनि भाडा तिर्नसक्ने बताए। तर, घरमा गीता नभएको चाल पाएपछि फर्किए।
घटनाको अघिल्लो दिन साँझ पनि उनीहरू त्यस क्षेत्रमा देखिएका थिए। घटनाको दिन बिहानै नजिकै चिया पसलमा गएर बसे। त्यसपछि दुवै जना गीताको घर जाँदा भुइँतलामा रहेकी अञ्जलीसँग भेट भयो। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान विवरणअनुसार दुवैले अञ्जलीसँग गीताबारे सोधपुछ गरेका थिए। अञ्जलीले तलबाट फोन गरेर 'दुई जना भेट्न आएको' बताइन्। गीताले भने भेट्न मानिनन्।
केही छिनको कुराकानीपछि अञ्जली दुवैका लागि चिया पकाउन भान्छामा छिरिन्। यही मौका पारेर मनराजले ओछ्यानमा रहेका हेमन्तलाई अन्धाधुन्ध खुकुरी हाने। लगत्तै प्रमेशले अञ्जलीको कपाल समाते। मनराजले उनलाई पनि खुकुरी हाने। कोठामै रहेकी ७ वर्षीया छोरीलाई पनि घाँटीमा खुकुरी हाने। गम्भीर घाइते भएकी उनी भागेर शौचालयमा लुक्न गइन्।
मल्लका अनुसार बालिका नदेखेपछि उनीहरू दोस्रो तलामा गएर गीतालाई खोज्न थाले। गीता शौचालयमा लुकेको चाल पाएपछि ढोका फोड्ने प्रयास गरे। गीताले हो–हल्ला गरिन्। डराएर दुवै भागे। घटनास्थलबाट करिब सय मिटर पर खुकुरी फाले। सामाखुसी चोकमा आएर धारामा रगत लागेको हात धोए। कपडा फेरे र ट्याक्सी चढेर भागे।
'घटनामा संलग्नहरू श्रेष्ठ दम्पतीको नभई गीताको हत्या गर्न गएको देखिन्छ,' मल्लले भने, 'गीता भएको तलामा जान उनीहरूकै फ्ल्याट प्रयोग गर्नुपर्ने र हत्या गरी भाग्दा अवरोध आउनसक्ने देखेपछि उनीहरूले पहिला हेमन्त र अञ्जलीलाई नै मारेको देखिन्छ।'
गीताको हत्याका लागि सम्भावित अवरोध पन्छाउनेबाहेक प्रहरीसँग श्रेष्ठ दम्पती मारिनुको अर्को ठोस कारण छैन। गीताको हत्या गर्न २ लाख रुपैयाँ दिएर पठाउने व्यक्तिसम्म पनि प्रहरी पुगेको छैन। 'आज सार्वजनिक भएका तथ्य र कारणबाहेक थप जानकारी प्रहरीसँग छ, तर अनुसन्धान जारी रहेकाले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन,' पत्रकार सम्मेलनमा डिआइजी मल्लले भने।
घटना पुरानो र जटिल रहेको तथा प्रहरीले मुख्य अभियुक्तबाट सहयोगी पक्राउ गर्नुको साटो सहयोगी हुँदै मुख्य योजनाकारसम्म पुग्ने पद्धति अपनाएकाले केही प्रश्न अनुत्तरित देखिएको उनले बताए।
यसअघि अनुसन्धानमा गीताका साझेदार पूर्ण गुरुङ, रमेश न्यौपाने र उनका पूर्व श्रीमान उत्तम खड्कालाई समेत शंकाको घेरामा राखिएको थियो। यसबारे प्रहरी अनुसन्धान मौन छ। लामो समय घटना जेलिँदा त्यससँग जोडिएका व्यक्ति स्वदेशमा नरहेकोसम्म जानकारी दिइए पनि मल्लले तिनका विवरण र भूमिकाबारे खुलाएन।
अञ्जलीको परिवार भने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान विवरणप्रति विश्वस्त देखियो। पत्रकार सम्मेलनमा आएका अञ्जलीका भाइ ज्ञानेन्द्र प्रधानले नागरिकसँग भने, 'प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणमाथि विश्वास लागेको छ।'
'दुई जना आरोपी समातिएपछि वर्षौंदेखिको हाम्रो घाउमा थोरै भए पनि मलम लागेको छ,' उनले भने।